Dhugaa Haacaaluu!Ajjeechaa Haacaaluu irratti dhugaa qabatamaa!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhugaa Haacaaluu!Ajjeechaa Haacaaluu irratti dhugaa qabatamaa!!!
Dhugaa Haacaaluu!Ajjeechaa Haacaaluu irratti dhugaa qabatamaa!!!
Dhugaa Haacaaluu!Ajjeechaa Haacaaluu irratti dhugaa qabatamaa!
Ajjeechaa goota keenya Haacaaluutiin wal qabatee oduu baay’eetu adeemaa jira. Sobni odeeffamu dhugaa isaas ni dhoksaa, lubbuu namaas ni miidha kanaaf dhugaa adda haa baafannu. Ani yeroon dhagahu inni rukutamee gara hospitaala jalqabaatti geeffamaa ture, Ergasiitii Yeroo hospital jalqabaatti geeffamuus yeroo paauloositti qoratamus Artistoota achi turan bilbilaan hordafaan ture. Wantoota qabatamaa ta’an kunooti:
1. Haacaluun akka sa’aa biyyaatti ganama gara sa’aa 4 maatii biraa manaa bahe
2. gara sa’aa 9 Hiriyyaa isaa Ingiduu fi Yimar bilbilee bishaan o’aa ykn stiimii galla jedhee akka gaafate, isaan bakka hojiitti qabamanii akka jiraniif akka hin dandeenye itti himan
3. Ergasii haati warraa Haacaaluu bilbila sa’aa dheeraaf yaaltee akka didee fi bilbilli isaa akka hin hojjenne himatte jedhan (ani ishii hin dubbisne, warra itti dhihaatu irraan dhagahe)
4. Galgala sa’aa 3 booda Lamiroot Ingiduutti bilbiltee dhahameera dhaqqabi jetteen
5. Ingiduu fi Yimar gara Labuu deemani, Garuu Lamiroot bakka isaa seeraan waan itti himuu diddeef ykn waan itti hin himneef yeroo dheeraadhaaf akka naannahaa ture hima. “osoo seeraan natti himte silaa daqiiqaa 10 keessattin bira gahaa ture” jedhee Ingiduu bohaa jira jedhu
6. Yeroo bira gahan Haacaluun lubbuun waan jiru hin fakkaatuu,
7. Ingiduu fi Yimar isa kan argan barcuma irra taa’anii konkolaataa ofan irra taa’eeti ykn bakkuma taa’ee konkolaataa oofu (Driver seat) irratti
8. Lamiroot kamal ammo barcuma konkolaachisaa cinaa YKN passenger seat irra taa’aa turte. (EEYYANI Anis gaaffiin qaba, maalif akka dhiigni hin dhumne hin dhorkin fi maalif buutee hin iyyin? kkf?)
9. Ingiduu fi Yimar Haacaaluu konkolaataa Ingiduutti dabarsanii Galaanitti qajeelani. Garuu naasuu irraa kan ka’e ingiduun gear konkolaataa osoo hin jijiiriin oofee konkolaatan jalaa dhohe ykn gubate.
10. Ingiduun Galaanaadhaan akka Haacaaluun dhahamee himee hospitalatti nu eegi fidnee dhufaa jirra jedheen itti hime. Galaanaan obboleessa Simee tufa (Zamaduu) waliin akka turaniifi hospitaala deemanii kaardii kutanii akka eegaa turan. (Galaanaan dura dhaqqabee, Haacaaluun lubbuun turee, waa itti dhaammateera fi kkf kan jedhu SOBA)
11. Ingiduunfaan Haacaaluu gara konkolaataa isaatti deebisani isa Barcuma duubaa irratti Lamiroot Tishartii Haacaaluun bakka madaa isaa qabdu godhanii hospitaala fidan
12. Hospitala yeroo gahan namni hedduun akka dhaqqabee isaan eege.
13. Lamirootin Haacaaluun maal ta’e jedhee namni gaafateera, waan garagaraa himte akka fakkeenyatti
• Na dabbare naan jedhee osoo filmii teenyee ilaalluu balbala konkolaataa bananii ana haacaaluu osoo inni jedhuu rukutanii
• Fincaniif gadi bu’eetu alatii rukutanii
• Gadi bu’ee osoo ol-deebi’uu rukutanii fi kkk jechaa turte jedham Garuu mataa qabattee hospitalatti boo’aa turte jedhama.
14. Hospitaalatti qaamni mootummaa komishinar Hasan, Komishinar Dachaasaa, Magarsaa fi kan biro dhufanii Ambulaancii polisiitiin fuudhanii Pa’uloositti reenfi akka qoratamu fuudhanii deemani
15. Lamiroota polisoonni qabanii bakka Haacaaluun itti rukutame jedhame fuudhanii deeman
16. Pa’uloositti corona qabaachuu malaa fi sababa gargaraa uumanii qorannaa waan didaaniif lolli akka itti ka’eesample xiqqoo akka fuudhani warri achi turan Hospitaala Pa’uloos komatu. Yeroodhuma san Artistootata beekamoo ani dubbise “Isanumatu galaafate, Haacaluu akka karaa deemaa du’eti malee akka Haacaluutti tajaajila hin gooneef jedhanii bo’aa turan.
Ajjeechaa Haacaalu Wanti beekamu
• Qaamni isaa madaa Rasaasaa 2 qaba, karaa seenee fi bahe jechuudha. karaa mirgaa Bobaa jalaa fi dugda karaa bitaa isaa bakka harka fi dugdi walgahuu naannoo onneeti. suura ilaalaa
• Irsaasii ykn mataan rasaasaa konkolaataa keessaa argame Garuu wanni raajii namatti ta’e bakka tokko illee konkolaataa irra miidhaa hin geessifne.
• Qalahaa ykn bullet shell ammo alaa argame namni jedhu jiraa, konkolaataa keessaa carpet ykn minxaafii miila Haacaaaluu jalaa argame kan jedhus jira. ADDAN BAAFADHA
Dhuma irratti: hanga mootummaan Abiyyi jirutti dhugaan haacaaluu hin bahu. Diraamaa waan ittiin hojjetaniif dhugaa dhoksuuf ni hojjetu, Oromiyaa bilisa baate qofatu dhugaa haacaaluu arga
Kan hafe itti deebinaa.
Yadata Lamuu irraa
Mootummaa Uummatatu filatee aangoo laataf malee koronaan hin filu.